हामी कसरी पाइला-पाइलामै ठगिन्छौं?
म बिहान सबेरै उठेर दूध किन्न जान्छु। सामान्यतया प्याकेटमा लेखिए बराबरको दूध म पाउँदिनँ। सूर्योदयसँगै ममाथि ठगीको पहिलो झापड प्रहार हुन्छ दूध उत्पादक कम्पनीहरूबाट।
त्यसपछि दोस्रो झापड दूध बेच्ने खुद्रा पसलेले कसेर हान्छन्। एक प्याकेटको ३३ रुपैयाँ पर्ने दूधलाई हरेक दिन ३५ तिर्नुपर्छ। खुद्रा पैसा नभएको बहानामा बिक्रेताले जानी–जानी दुई रुपैयाँ फिर्ता दिँदैन। म पनि प्रायः चुप्पै लाग्छु। यो मेरो कमजोरी हो। कहिलेकाहीँ मागेँ भने उसले दुई रुपैयाँ त दिँदैन, बरु त्यसको सट्टा एउटा चक्लेट भिडाइदिन्छ। किराना पसलको मात्र के कुरा गर्नु, चक्लेट भिडाइदिने चलन त ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा पनि उस्तै छ। उनीहरू यति सजिलै पैसाको सट्टा चक्लेट अघि सार्छन्, मानौं हामीकहाँ चक्लेट भनेको मुद्रा विनिमयको अर्को माध्यम हो।
सार्वजनिक यातायातको ठगी त सबभन्दा चर्को भइहाल्यो। खुद्रा पैसा फिर्ता लिनुपरे सधैंको कचकच सहनुपर्छ। कुनै रुटमा १८ रुपैयाँ भाडा छ भने २० रुपैयाँको फिर्ता पाइँदैन। अलि झोक्किएर माग्दा उनीहरू यस्तरी मुख बिगार्छन्, मानौं हामीले फिर्ता पैसा होइन, उसैको खल्तीबाट मागेका हौं।
खुद्रा पैसाको समस्या सार्वजनिक संस्थानहरूमा पनि उस्तै छ। टेलिकममा बिल तिर्न जाँदा सामान्यतया खुद्रा फिर्ता पाइने आस नराखे हुन्छ। बिजुलीको बिल तिर्दा त्यस्तै हुन्छ।
सरकारी तलब खाएर बसेका कर्मचारीले त कम्तीमा उपभोक्ताको एक पैसा बढी नआओस् भनी चनाखो भएर खुद्राको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन र!
भनसुनको यो समस्याबाट स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अछुतो छैन।
टिचिङ, वीर र गंगालालजस्ता सरकारी अस्पतालमा बिरामीले शल्यक्रिया निम्ति पालो पाउन पहुँचवाला व्यक्ति गुहार्नुपर्छ। भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने गम्भीर बिरामीका लागि पनि भनसुन गर्नुपर्छ। अपरेसनका लागि चार महिनापछिको ‘डेट’ लिएर चुपचाप फर्किएका निरीह नागरिक आफूभन्दा पछि आएका पहुँचवाला बिरामी त्यही दिन अपरेसन गरेर फर्किएको टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन्। कति त पालो आउँदासम्म संसारबाटै विदा भइसकेका हुन्छन्।
अर्काको देशमा श्रम बेच्न जाने कामदारले श्रम स्वीकृति लिने लाम हेरौं। कोरियामा मजदुरीका लागि जानेको फारम भर्ने लाम हेरौं। विदेश जान दलाललाई पैसा खुवाएर मात्र पुग्दैन, श्रम स्वीकृतिका लागि पाइला–पाइलामा सरकारी कर्मचारी रिझाउनुपर्ने नियति भोग्न बाध्य छन् हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनी।
सहरमा भौतिक पूर्वधारको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौं नाम मात्रको महानगर हो। न यहाँ सार्वजनिक सवारीको कुनै भर छ न त सार्वजनिक शौचालयको। बिहान–बेलुकी अफिस समयमा सार्वजनिक यातायात चढ्नु भनेको इन्द्रजात्रा बेला वसन्तपुर छिर्नुजत्तिकै हुन्छ। खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन ती सवारीमा। ट्राफिक प्रहरी उपभोक्ताले पाएको सास्ती र दुर्घटनाको जोखिम देखी–देखी आँखा चिम्लन्छन्।
उता, करिब ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको काठमाडौंमा मुश्किलले एक दर्जन ठाउँमा मात्र सार्वजनिक शौचालय छन्। भएका शौचालयको हालत कस्तो छ भने, त्यहाँ छिर्ने मानिस बिरामी पर्लाजस्तो दुर्गन्ध आउँछ। उहाँ भने प्रत्येक उपभोक्तासँग पाँचदेखि दस रुपैयाँ असुलिन्छ, तर सरसफाइका नाममा एकचोटि पानी पनि खन्याइँदैन।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पौष २१, २०७३ १४:१३:१९